Ixesha kunye nabahlobo 21
Ingaba kukho nayiphi na indawo yokubango kwalabo abathi imiphefumlo yabantu abahambayo kwiinyoni okanye kwizilwanyana?
Kukho isizathu sebango, kodwa ingxelo iyinyani yonke. Imiphefumlo yabantu ayiphindi yazalwe ibe ziintaka okanye izilwanyana ngaphandle kokuba la magama asetyenziswa ebantwini. Emva kokusweleka komntu, imigaqo-nkqubo eyabhalwa yinxalenye yayo yesidumbu ebuyiselwe ebukumkanini obuthile okanye kumhlaba obuthathwe kuwo ukwakhiwa komzimba womntu. Zininzi izizathu apho ibango linokwenziwa khona lokuba umphefumlo womntu ubuyele ebomini emzimbeni wesilwanyana. Unobangela oyintloko wale ngxelo yinkolelo kunye nesiko; kodwa isiko lihlala ligcina iinyaniso ezinzulu ngendlela engekhoyo. Inkolelo yindlela ebisisiseko solwazi lwangaphambili. Lowo ubambe inkolelo ngaphandle kokuqonda ukuba kuthetha ntoni ukholelwa kwifom, kodwa engenalo ulwazi. Abo bakholelwa kule mihla bakholelwa kwisiko lokuba imiphefumlo yabantu iphinde yazalwa zizilwanyana, babambelela kwinkolelo nakwisiko kuba belahlekelwe lulwazi olufihliweyo lwangaphandle kunye nolwenyani. Injongo yokwenziwa ngokutsha komzimba kunye nokuvela ngokutsha kwengqondo kwimizimba kukuba iya kufunda ukuba ubomi behlabathi bunokufundisa ntoni. Isixhobo afunda kuso sisimo somntu esilwanyana. Emva kokuba idlulile isuka kwimo enye yabantu ekufeni kwaye sele iza kuphinda yazalwe ngokutsha iyazakhela kwaye ingena kolunye uhlobo lomntu wesilwanyana. Kodwa akungeni naluphi na uhlobo lwezilwanyana. Alungeni emzimbeni wesilwanyana. Isizathu kukuba ifom yezilwanyana ngokungqongqo ayizukubonelela thuba lokuqhubeka nemfundo. Umzimba wesilwanyana ubuyisa ingqondo kuphela. Iimpazamo zobomi obunye azinakulungiswa ngengqondo kumzimba wesilwanyana ukuba kunokwenzeka ukuba ingqondo ibekho emzimbeni wesilwanyana, kuba isilwanyana kunye nengqondo zingenakuphendula ekuchukumiseni kwengqondo yomntu ngamnye. Inqanaba lomntu ekuphuhlisweni kwengqondo liyimfuneko ukuze ingqondo inxibelelane nefom yesilwanyana; Ingqondo yesilwanyana ayisosixhobo esifanelekileyo ukuba ingqondo yomntu isebenze. Ukuba bekunokwenzeka ukuba ingqondo iphinde ivele emzimbeni wesilwanyana, ingqondo, ngelixa ingekho emzimbeni, ibiya kungazi nto ngokwayo njengengqondo emzimbeni wesilwanyana. Olo luthuthu lwengqondo emzimbeni wesilwanyana alunakuba yinto engenanjongo, njengoko kungekho siphoso sinokulungiswa kwaye sihlawulelwe. Iimpazamo zinokulungiswa, iimpazamo zilungiswe kwaye nezifundo ezifundwe kunye nolwazi olufunyenwe kuphela ngelixa ingqondo ikumzimba womntu, kwaye unxibelelana nengqondo eya kuphendula ekuchukumeni kwayo. Ke akukho ngqiqweni ukucinga ukuba nantoni na enokwenziwa ngumthetho ethi ingqondo ethathe uhlobo lomntu ifakwe emzimbeni wolunye uhlobo.
Kuthiwa ngaphakathi UMhleli oLungiselelwe, eLizwini, Vol. I-2, Hayi. I-3, ngoDisemba, i-1905, Ukuba: “Umntu ucinga kwaye indalo iphendula ngokumanyanisa iingcinga zakhe kumqhubekekisi oqhubayo ngelixa ekhangela ezijonga engazi ukuba ngubani unobangela. . . .Umntu ucinga kwaye uyichule indalo ngokwengcinga yakhe, kwaye indalo ivelisa inzala yakhe kuzo zonke iintlobo zezinto eziphilayo njengabantwana beengcinga zakhe. Imithi, iintyatyambo, amarhamncwa, izinto eziphindaphindiweyo, iintaka, zikwimo yazo kukukrala kweengcinga zakhe, lo gama kwisimo ngasinye esahlukileyo kuboniswa kwaye kukhethekileyo kwenye yeyona minqweno yakhe. Indalo iphinda ivele ngohlobo olunikiweyo, kodwa ingcinga yomntu imisela uhlobo nodidi lutshintsha kuphela ngengcinga yakhe. . . .Amaziko ajongene nobomi kwimizimba yezilwanyana kufuneka abenobume bawo kwaye abume ngokuxhomekeka kwingcinga yomntu ade akwazi ukucinga. Ke abasayi kuludinga uncedo lwakhe, kodwa baya kuzakhela iifom zabo njengoko ingcinga yomntu izakhela eyabo kunye neyabo. ”Ngaba ungasicacisa ngokupheleleyo indlela iingcinga ezahlukeneyo zomntu ezenza ngayo izinto malunga nezinto zomhlaba ukuze ukuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zezilwanyana ezinjengengonyama, ibhere, ipikoko, i-rattlesnake?
Ukuphendula lo mbuzo kunganyanzeleka ukuba ubhale inqaku elifana nelinye lee-edishini zeLizwi. Oku akunakwenziwa kwisithuba esizinikezelwe kwiiMothers ezinabahlobo, kwaye kufuneka ishiywe kwisebe lokuhlela leli phephabhuku. Siza kuzama, nangona kunjalo, ukucacisa umgaqo ekuphunyezwe ngawo ikoteyishini elapha ngasentla.
Kuzo zonke izidalwa eziphilayo umntu ngumntu kuphela onobuhlakani bokuyila (njengoko wahlula-hlukene nokuzalela.) Indawo yokudala ingamandla akhe okucinga kunye nokuthanda. Ukucinga kuyimveliso yesenzo sengqondo kunye nomnqweno. Xa ingqondo isebenza kumnqweno wokucinga wenziwe kwaye ingcinga ithatha imeko yayo yobomi behlabathi. Lo mbandela wobomi ukwindiza esemzimbeni ebonakalayo. Iingcamango ezinokubakho zibakho kwimeko ephezulu kumzimba kwindiza yokucinga. Umnqweno njengommiselo wecosmic owenziwa ngengqondo yomntu uvelisa iingcinga ngokobume bengqondo kunye nomnqweno. Ezi ngcinga ngokobume bengqondo kunye nomnqweno. Ezi ngcinga xa ziveliswa ziindidi zeefom ezibonakala emhlabeni, kwaye ezi ntlobo zeefom ziphawulwa ngamalungu athile okanye izigaba zobomi ezingenako ukuzenzela iifom.
Umntu unaye ngaphakathi kwakhe uhlobo lwaso sonke isilwanyana emhlabeni. Uhlobo ngalunye lwesilwanyana okanye udidi ngalunye libonisa umnqweno othile kwaye luya kufumaneka ebantwini. Kodwa nangona zonke izilwanyana zikumntu, yena, oko kukuthi, udidi, ungumntu, kwaye izilwanyana ezikuye zibonwa ngamaxesha anjalo kuphela xa evumela inkanuko kunye neminqweno ukuba ithathe kwaye ibonakalise indalo yakhe kuye. Ingathi yonke indalo yezilwanyana yayinemingxunya emininzi edityanisiweyo kunye nenxeba emzimbeni wakhe kwaye uyinyama eyindalo yayo yonke indalo yesilwanyana. Jonga ubuso bendoda xa ibanjwe yiparoxysm yenkanuko, kwaye imeko yeso silwanyana silawulayo siyabonakala ngokucacileyo kuye. Ingcuka ijongeka ngaphandle kobuso bayo kwaye ibonakale ngendlela yakhe. Ihlosi libhululana ngokungathi liza kungxama kwixhoba laso. Inyoka iluma ngentetho yayo kwaye ihamba ngamehlo ayo. Ingonyama iyabharhula njengomsindo okanye inkanuko isebenza ngomzimba wayo. Nayiphi na kwezi inika enye indawo njengoko ihamba emzimbeni wayo, kunye nokubonakala kobuso bakhe kuyatshintsha nokuba kuhlobo. Kulapho umntu acinga ngohlobo lwenyathi okanye ingcuka okanye impungutye ayila ngayo ingcinga yehlosi, ingcuka, okanye impungutye, kwaye nengcinga ihlala kwihlabathi lobomi kude kutsalwe kumhlaba weengqondo zangaphantsi ukuba inike uhlobo amaziko abakho ngokuzalwa. Zonke ezi ntlobo zezilwanyana zahlukeneyo zidlula kwifom kwaye zinikwa imbonakalo ebusweni bomntu njengoko imifanekiso ihamba emva kwesikrini. Nangona kunjalo, akunakwenzeka ukuba ingcuka ibonakale ngathi yimpungutye okanye impungutye ibambe ngathi yinyathi okanye enye yezi njengenyoka. Isilwanyana ngasinye sisebenza ngohlobo lwaso kwaye soze sizenze njengalo naluphi na uhlobo lwesilwanyana ngaphandle kwaso. Oku kungenxa yokuba, njengoko kuchaziwe kwikoteyishini, kwaye njengoko kuya kuboniswa kamva, isilwanyana ngasinye luphawu oluthile, uhlobo oluthile lomnqweno emntwini. Ukucinga umcwangcisi wazo zonke iintlobo zehlabathi, kwaye umntu kuphela kwesilwanyana esicinga. Umi ngokunxulumene nomhlaba wokubonakalayo njengoThixo, umdali, kuthiwa unxulumene nomntu. Kodwa kukho enye indlela apho umntu angunobangela wokubonakala kwezilwanyana kwinyama yenyama. Oku kuyakucacisa enye yeentsingiselo ezininzi kwaye sesizathu sengxelo kwizibhalo zakudala ezinokuthi umntu azalwe ngokutsha okanye azidlulisele kwimizimba yezilwanyana. Yiyo le: Ngexesha lobomi umnqweno ongumntu yimigaqo yezilwanyana eziphindaphindiweyo, engenandawo ichanekileyo. Ngexesha lokuphila komntu, umnqweno kuye uhlala uguquka, kwaye akukho luhlobo lwesilwanyana luqinisekileyo kubungqina obude kunye naye. Ingcuka ilandelwa yimpungutye, impungutye ibhere, ibhere ngebhokhwe, ibhokhwe yegusha njalo njalo, okanye nangayiphi na indlela, kwaye oku kuyaqhubeka ngokuhlala ngaphandle kobomi ngaphandle kokuba kukho umkhwa othethwayo kwindoda apho esinye sezilwanyana ezininzi zinika amandla abanye kwimvelo yakhe kwaye iyigusha okanye impungutye okanye ingcuka okanye ithwele ubomi bayo bonke. Kodwa nangayiphi na imeko, ekufeni, umnqweno oguqukayo wendalo yakhe umiselwe kuhlobo oluthile lwesilwanyana olunokuthi lube nalo kangangexesha elithile uhlobo lomntu olungu-astral. Emva kokuba ingqondo imkile kwisilwanyana sayo, ngokuthe ngcembe isilwanyana siyakhulula kulawulo lomntu kwaye sithathe uhlobo lwaso lwenene lwesilwanyana. Esi silwanyana ke sisidalwa esingenanto yakwenza nobuntu.